musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » UNWTO Mutambo Wekuchinja Sarudzo: Ichaita sei zvino?
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Costa Rica Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • misangano • nhau • Spain Kuputsa Nhau • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
Zuva idzva reWorld Tourism! Zuva idzva reUNWTO! Zuva Idzva reCosta Rica Tourism! Nyika yezvekushanya yatarisana nekuchinja kwemutambo neCosta Rica iri kutungamira musarudzo dziri kuuya kuUNWTO General Assembly muMadrid.
nhasi The Hon. Gustav Segura Costa Sancho, gurukota rezvekushanya kweCosta Rica anga aisa mutsipa wake mukukumbira zviri pamutemo kuvhota kwakavanzika kwekusimbiswazve kweSecretary-General weUNWTO pamusangano unouya weUNWTO General Assembly Zvita 3, 2021.
Ichi chikumbiro chichabvisa kusimbiswa kweSG nekukumbira. Iyi nhanho ndeyekutanga munhoroondo yeUNWTO, uye shanduko yemutambo.
Chii chaizoitika kana iyezvino Munyori Mukuru Zurab Pololikashvili asina kugamuchira mavhoti anodiwa 2/3 kuti asimbiswe kune imwe temu? Maitiro chaiwo anotsanangurwa muchinyorwa chino - uye ari nyore!
Mukushamisika nhasi, The Hon. Gustav Segura Costa Sancho, gurukota rezvekushanya kweCosta Rica akaita kuti iye nenyika yake vagare pachigaro chevatyairi cheWorld Tourism.
Vashumiri vakawanda vakanga vachikarira kuti uku kutama kuitike, asi hapana akanga ane ushingi hwokubudisa mitsipa yake amene kunze kana kuti kunyange kunokorwa mashoko.
Tichifunga nezvedambudziko ririkuitika reCCIDID-19 rinoita kuti zviome kuti nyika zhinji dzitumire gurukota rezvekushanya kana nhume kuMadrid, kushinga uku kweCosta Rica kuchaita kuti vamwe vatevedzere.
Kutora chikamu kwakanaka kunodiwa kwete chete kuchikwata, asi kuvimbisa sarudzo yakanaka uye yakakwana nenhengo dzeUNWTO. Tichifunga nezvekushanya kuri kufamba nedambudziko rakanyanya kuoma, hutungamiriri hwakanaka uye hwakasimba huchabatsira nyika dzese, hupfumi hwayo, mabasa nemitemo.
Zvinofanira kucherechedzwa, kuti Costa Rica iri kubvunza, kuti kudomwa kwaSecretary-General yenguva 2022-2025 ichaitwa nekuvhota kwakavanzika kwenhengo dzese dziripo uye dzinoshanda sezvakataurwa mune zvakajairwa. Chikumbiro ichi chichaita iyo inotonga iyo hukama pakati peNyika / UNWTO, Costa Rica akadaro mutsamba yake kuUNWTO Secretariat munaNovember 15.
YAMBIRO: Kuvhota Kwakavanzika hakureve "Kuvhota Kwemagetsi."
eTurboNews yakagamuchira yambiro iyi nhasi kubva kunhengo yemukati denderedzwa uye UNWTO mukati ane ruzivo rwakadzama. Akaudza eTN..
Ngozi pakati pechinyakare bepa vhoti uye vhoti yemagetsi!
Nharo huru yeSecretary-General ndeyekuita kuti zvive nyore kunhengo kuvhota paGeneral Assembly vachishandisa nzira yemagetsi yekuvhota.
Sezvineiwo, iyezvino Secretary-General ari kuita chirevo chimwe chete Agenda item 16. This item suggest a change in the rules of procedure for the General Assembly (A/24/16).
Zvikonzero nei Munyori Mukuru aripo iye zvino angasarudza nzira iyi zviri pachena:
Mavhoti nevatauri havagone kushandiswa sezvo maitiro acho achiongororwa kubva kuA kusvika kuZ.
Voti yemagetsi haigone kuongororwa.
Kana General Assembly ikasatambira kurudziro yakaitwa neExecutive Council yechinzvimbo cheMunyori Mukuru weSangano.
Iyo GA yaizoraira Executive Council kuti pachikamu chayo chegumi neshanu chichaitwa muMadrid, Spain, Zvita 115, 3, kuvhura nzira nyowani yekusarudzwa kweMunyori Mukuru weSangano.
Inorayira Dare Repamusorosoro kuti sarudzo dzakadaro dzine nguva shoma yemwedzi mitatu uye mwedzi mitanhatu, kutanga kubva pazuva rakavhurwa sarudzo.
Inorayira Mutungamiriri weExecutive Council uye Munyori Mukuru wesangano kuti vadaidze 116th Executive Council uye inoshamisa General Assembly, muna Chivabvu 2022, panzvimbo uye zuva richatsanangurwa.
Mazita seAd Interim Secretary General, VaZhu Shanzhong, Executive Director, vanozotora mabasa akadai vachibatana neMutungamiriri we Executive Council, kutanga Ndira 1, 2022.
Maitiro uye karenda yekusarudzwa kweSecretary-General weSangano panguva ya2022-2025.
December 3, 2021: Mvumo yemaitiro esarudzo uye nguva pamusangano wechi115 we Executive Council muMadrid, Spain.
December 2021: Chiziviso chezororo chinofanira kuiswa pawebhusaiti yeUNWTO uye chinyorwa verbale kuti itumirwe kunhengo dzese dzichiratidza nguva yekupedzisira yekugamuchira mafomu.
11 March 2022 (zuva rinofanira kusimbiswa): Nguva yekupedzisira yekugamuchira zvikumbiro, kureva, mwedzi miviri isati yatangwa ye116th chikamu che Executive Council muMadrid, Spain, pa11 Chivabvu 2022 (zuva richasimbiswa).
Pakuvhurwa zviri pamutemo kwevachakwikwidza, vakwikwidzi vanoziviswa nezve chokwadi chekukwikwidza kwavo.
11 April 2022 (zuva richasimbiswa): Cherekedza verbale ichapihwa ichizivisa vakagashirwa vamiriri (zuva rekupedzisira rekuparadzirwa kwevamiriri mazuva makumi matatu ekarenda isati yatangwa ye30th Executive Council musangano).
11-12 Chivabvu 2022 (mazuva achasimbiswa): Kusarudzwa kweanodomwa neDare Repamusoro pamusangano wayo wechi116 uchaitirwa muMadrid, Spain, guta guru reSangano.
13 May 2022: Sarudzo yeMunyori Mukuru wenguva 2022-2025 pamusangano unoshamisa weGeneral Assembly uchaitirwa muMadrid, Spain.
Mitemo, Maitiro uye Smallprint:
Maitiro eSarudzo eMunyori Mukuru weUNWTO:
Sarudzo yeUNWTO Secretary-General ine zvikamu zviviri:
Maitirwo esarudzo muDare Repamusoro apo, pakugamuchira vavhoti, Executive Council inovhotera KURUMIRA kuGeneral Assembly mumiriri.
Mumiriri anokurudzirwa anotenderwa (kana kwete) neGeneral Assembly.
Chisungo 22 cheUNWTO Statutes inosimbisa zvakajeka kuti Sarudzo yeMunyori Mukuru inofanirwa kutorwa nezvikamu zviviri muzvitatu zvenhengo dzinoshanda uye dziripo:
Zvichakadaro, Chisungo 38, ndima 2, dash e) yeMitemo yeGeneral Assembly, inoti sarudzo yeSecretary-General ichaitwa nehuwandu hwezvikamu zviviri muzvitatu zvenhengo dziripo uye dzine simba.
Gare gare, chikamu chechi43 cheMitemo yeGeneral Assembly chinotaura pachena kuti sarudzo dzinofanirwa kuitwa ne vhoti yakavanzika.
Yange iri tsika yekusarudza Secretary-General nekurumbidza, asi izvi hazvigadzirwe mumitemo iripo, itsika.
Kana imwe chete Nhengo yeNyika inobvunza kuti sarudzo iitwe nevhoti yakavanzika, zvakakwana kusiya tsika yekuzivisa uye enda mberi nekuvhota kwakavanzika nenhengo dzese dziripo uye dzinoshanda.
Kuti asarudzwe kana kusarudzwa patsva, mumiriri akakurudzirwa ne Executive Council, anofanirwa kusvika 2/3 yenhengo dzese dziripo uye dzinoshanda pakuvhota.
Kana pasina kudomwazve kwaSecretary-General, General Assembly ichatora chibvumirano muchikamu chechipfumbamwe cheSarudzo yeSecretary-General, apo inorayira Executive Council kuti ivhure hurongwa hutsva hwekudoma. Munyori Mukuru weUNWTO.
Chinyorwa 22 cheMitemo yeUNWTO inoti:
“Secretary-General achadomwa nezvikamu zviviri kubva muzvitatu zveruzhinji zveMitezo izere uye vanovhota muParamende, pane kurudziro yeKanzuru, kwetemu yemakore mana. Kusarudzwa kwake kuchavandudzwa. ”
Nguva yekushanda kwaSecretary-General aripo inopera musi wa 31 Zvita 2021. Naizvozvo zvinosungirwa kuGeneral Assembly kugadza Secretary-General wenguva ya2022-2025 pamusangano unoshamisa uchaitwa uye zuva richaitwa. yakatarwa muna 2022.
Nekuda kweizvozvo, zvinoenderana neChikamu 22 cheMitemo uye neRule 29 yeMitemo yeKufambiswa kweMutungamiriri weKanzuru, Executive Council ichadikanwa pachikamu chayo chegumi nematanhatu (116-11 Chivabvu 12).mazuva anozosimbiswa)) kukurudzira munhu anenge adomwa kuMusangano Mukuru. Gwaro iri rinopa maitirwo nehurongwa hwesarudzo dzakadai.
Nezvinangwa zvekudomwa uku, zvinokurudzirwa kuti tsika yakagadzwa itevedzwe uye, kunyanya, iyo mitemo yakatorwa neKanzuru pakusarudzwa kweanodomwa pachinzvimbo cheMunyori Mukuru pachikamu chayo chemakumi maviri nematatu muna Chivabvu 1984 (chisarudzo 17(XXIII)), chakawedzerwa neavo vakagamuchirwa pamusangano wavo wechimakumi matatu nechina muna Mbudzi 1988 (chisarudzo 19(XXXIV)), uye pachikamu chayo chemakumi mana nechina muna Mbudzi 1992 (sarudzo. 19(XLIV)) kucherechedzwa.
Mitemo yataurwa pamusoro apa, iyo yakagara ichishandiswa kusarudzwa pachigaro cheMunyori-Mukuru kubvira 1992, inopa kuti:
“(A) chete nyika dzeMatunhu Nhengo dzeWTO ndivo vanogona kukwikwidza;
"(b) vakwikwidzi vachakumbirwa zviri pamutemo kuKanzuru, kuburikidza neSecretariat, nehurumende dzeNyika dzavari zvizvarwa zvadzo, uye zvirevo izvi zvinofanirwa kuitwa. yakagamuchirwa pasati papfuura (zuva rinofanira kutsanangurwa), postmark inopa humbowo hwazvo;
“(C) kuvhota kuchaitwa nevhoti yakavanzika zvichiteerana neMitemo Inotungamira yeKufambiswa kwesarudzo neChipupuriro Chakavhoterwa chakabatanidzwa neMitemo yeNzira dzeGeneral Assembly;
"(d) vhoti ichasarudzwa maererano neChikamu 30 cheMitemo uye Rule 28 yeKanzuru yeMitemo yeMaitiro, neruzhinji rwakareruka, rwunotsanangurwa semakumi mashanu kubva muzana uye rimwe remavhoti akakodzera akakandwa;
“(E) kusarudzwa kwemunhu mumwe akasarudzwa neKanzuru kuchaitwa, zvinoenderana neMutemo 29 weMitemo yeKanzuru, panguva yemusangano wega, chikamu chayo chinenge chiri musangano unorambidza, seinotevera:
“(i) Hurukuro yevamiriri ichaitwa panguva yemusangano wakavanzika umo chete pachange paine nhumwa nevaturikiri; hapazove nerekodhi rakanyorwa uye hapana tepi yakarekodhwa yenhaurirano;
(ii) panguva yekuvhota vashandi veSecretariat vanodiwa kuti vabatsire pakuvhota vachabvumidzwa;
"(f) Executive Council inosarudza kusakurudzira munhu anenge asarudzwa nehurumende yenhengo yeNyika muzvikwereti zvisina chikonzero (ndima 12 yeMitemo Yekubhadhara mari yakasungirirwa paMitemo);
“(G) kanzuru ichasarudza munhu mumwe chete anodoma kukwikwidza kuParamende.”
Pamusoro pezvo, maitiro akatarwa ekutambirwa kwemazita ayo akashandiswa kubva 1992 anopa zvinotevera maererano nekuratidzwa kwemazita:
“Mumwe nemumwe kudomwa kunofanirwa kuperekedzwa necurriculum vitae uye chirevo chegwaro nezvinangwa zvehutungamiriri, zvichiratidza maonero emunhu anenge adomwa pamusoro pemabatiro aachaita basa reMunyori Mukuru. Izvi zvinyorwa zvichaunganidzwa muchimiro chegwaro reKanzuru uye kuziviswa kuNhengo dzayo mukati menguva yakatarwa.
“Mukuda kuchengetedza kuenzana pakati pevakasarudzwa uye kuona kuti magwaro avo anoverengwa, zvinokurudzirwa kuti curricula vitae igare, toti, mapeji maviri uye zvirevo zvegwaro uye manejimendi chinangwa pamapeji matanhatu. Mazita acho achaunzwa mune alfabheti mugwaro reKanzuru. "
Kubva 1992, iyo nguva-yakatemerwa kugamuchirwa kwevamiriri (iyo inoenderana nehurumende inotsigira, curricula vitae uye zvirevo zvechinangwa zvinofanirwa kubatanidzwa) zvakasimbiswa mwedzi miviri isati yasvika iyo Executive Council inofanirwa kusarudza munhu anodomwa. Secretariat nekudaro inozivisa Nhengo dzese nenoti neshoko rekugamuchira kwega kwega kudomwa.
Kubva 1997, vakadomwa kuti vatore chigaro cheMunyori Mukuru vakataura nemuromo nezvekukwikwidza kwavo uye zvinangwa zvavo panguva yekudomwa kweKanzuru. Vanodanwa muhurongwa hwearufabheti yeSpanish yemazita avo, vanodomwa vanopihwa nguva yakaenzana yekuita mharidzo dzavo dzisingateverwi nenhaurirano.
Zvinoenderana neMutemo wechimakumi maviri nepfumbamwe(29) weMitemo yeMafambiro eDare Repamusorosoro, kurudziro kudare reParamende yemunhu anenge adomwa kuti agadzwe pachinzvimbo cheMunyori Mukuru: “ichaitwa nehuwandu hushoma hweNhengo dzeKanzuru dziripo nekuvhota2. Kana pasina mumiriri awana ruzhinji mugwaro rekutanga, kechipiri uye, kana zvichidikanwa mavhoti anotevera achaitwa kuti pasarudzwe pakati pevamiriri vaviri vanowana mavhoti akawanda kwazvo.
Zvinoenderana nemaitiro anogara achiitwa neSangano, akarangarirwa muchisarudzo 17(XXIII) cha1984, ruzhinji rwakareruka "runotsanangurwa sezvikamu makumi mashanu kubva muzana uye rimwe remavhoti akakandwa". Mutemo uyu wakasimbiswa muna 50 na1988 (zvisarudzo 1992(XXXIV) uye 19(XLIV)). Kana pakaitika nhamba isinganzwisisike, inoita seinopindirana nezvinofungwa, nezvinorehwa nemazwi uye nemaitiro akatanhamara, kuitsanangura pane kumiririra nhamba yemavhoti inokurumidza kupfuura hafu yemavhoti akakandwa.3.
Kana ari maitiro e "rechipiri" uye "rinotevera vhoti" rinotaurwa muRule 29(3), kana zvichinge zvichidikanwa, kujekeswa kwakapihwa neMutemo Adviser muRuzivo Runyorwa rweSarudzo yeMunyori Mukuru mu1989 uye yakasimbiswa. muna 2008 (16(LXXXIV)) ichashanda kana vaviri vakakwikwidza vakagovana nzvimbo yechipiri mugwaro rekutanga. Mhedzisiro inenge iri yekuti rimwe vhoti (uye mamwe akawanda sezvinodiwa kuti pave neruzhinji runodiwa) raizorongwa pakati pevamiriri vatatu kuti vasarudze kuti ndevapi vaviri vanenge vawana mavhoti akawanda kwazvo, vanozopinda musarudzo yekupedzisira.
Kumiririrwa kweNyika neimwe Nhengo Yakazara yeSangano panguva yesarudzo yemunhu anenge adomwa kuchatevera zvisungo zvakatorwa neGeneral Assembly pamusangano wayo wechigumi nepfumbamwe muRepublic of Korea muna 19 (chisarudzo 2011(XIX)), pamusangano wayo wechimakumi maviri Zambia/Zimbabwe muna 591 (resolution 20(XX)) uye pachikamu chayo chemakumi maviri nerimwe muColombia muna 2013 (chisarudzo 633(XXI)).
Izvo zvinorangarirwa kuti Nhengo kune iyo Chikamu 34 cheMitemo uye ndima yegumi nematatu yeMitemo yeMari yakasungirirwa kuMitemo iri kushandiswa panguva yesarudzo vanotorerwa kodzero dzekuve nhengo nenzira yemasevhisi uye kodzero yekuvhota muParamende. uye Kanzuru kunze kwekunge vapihwa rusununguko rwechinguva kubva mukushandiswa kwezvakatemerwa neParamende.
Maitiro ataurwa mugwaro iri akaitwa zvinobudirira, uye pasina kukonzeresa chero dambudziko, pakugadzwa kwakaitwa kubvira 1992.
Zvinoenderana nekurudziro yakaitwa neJoint Inspection Unit yeUnited Nations (JIU) ine chekuita nekusarudzwa nemamiriro ebasa reVakuru Vatungamiriri muUnited Nations System Organisations (JIU/REP/2009/8), munyoreri wega wega anokumbirwa kuti abatanidze. chitupa chehutano hwakanaka chakasainwa nevekuchipatara chinozivikanwa pakuratidzwa kwake sekutsanangurwa kwazvinoitwa mundima 6.
Sezvakagoverwa pasi peMutemo wechi27(2), izwi rokuti “Nhengo dziripo uye dziri kuvhota” richanzwisiswa kureva “Nhengo dziripo uye dzinovhotera kana kupokana”. Naizvozvo, kuvhota uye kuvhota pasina kuvhota kuchaonekwa sekusina kuvhota.
Zviito zvinofanirwa kutorwa neExecutive Council
Executive Council inokokwa:
Kusarudza kuti mitemo yakagamuchirwa neKanzuru yekusarudzwa kweanodomwa pachinzvimbo cheSecretary-General pamusangano wayo wemakumi maviri nenhatu muna Chivabvu 1984 (chisarudzo 17(XXIII)), ichiwedzerwa neyakagamuchirwa pachikamu chayo chemakumi matatu neina. Mbudzi 1988 (chisarudzo 19(XXXIV)), uye pachikamu chayo chemakumi mana nechina muna Mbudzi 1992 (chisarudzo 19(XLIV)) ichacherechedzwawo pachikamu chayo chegumi neshanu;
Kusimbisa kuti, pakududzirwa kwemitemo yemutemo inobata kusarudzwa kweMunyori Mukuru uye sarudzo dzataurwa mundima (a) pamusoro, panofanirwa kutaurwa nezvezviri mugwaro iri;
Kukoka Nyika dzeNhengo kuti dzikurudzire vamiriri venzvimbo yeSecretary-General kwenguva ya2022-2025, vachiona kuti mazita avo asvika kuHofisi yeSangano (Capitán Haya 42, 28020 Madrid, Spain) mwedzi miviri isati yatangwa chikamu chechigumi nematanhatu Executive Council, kureva, na116:24 maawa nguva yeMadrid, 00 Kurume 11 (zuva richasimbiswa), munguva pfupi yapfuura;
Kukumbira vanoda kukwikwidza kuti vape, pamwe chete neruzivo rwehupenyu uye ruzivo rwebasa, chirevo chegwaro uye chinangwa chekutungamira, vachitaura maonero avo pamusoro pemabatiro avachaita mabasa eMunyori Mukuru; uye
Kusimbisa kuti chikamu che116 cheExecutive Council chichasarudza munhu anenge adomwa icho chinofanirwa kukurudzira kumusangano unoshamisa weGeneral Assembly pachinzvimbo cheSecretary General weSangano panguva ya2022-2025.